သနပ်ခါးပန်းပြောတဲ့ “ သနပ်ခါးပန်း” | Layma's World
Posted on August 8, 2007 by layma
ကျွန်မ နာမည် ….. “သနပ်ခါးပန်း” လို့ ခေါ်ပါတယ်…..။ကျွန်မရဲ့ အသားက ….. ၀ါဝါ၀င်းဝင်းလေးပါ…..။
ကျွန်မ…..အစိမ်းရောင် အသိုက်အမြုံမှာနေပါတယ်….. ။
အစိမ်းရောင် နန်းတော်ရဲ့ လေသာပြတင်းကနေ အ၀ါရောင် မင်းသမီးလေး ကျွန်မ…. မျက်နှာပြလိုက်တဲ့ အခါ….. တလောကလုံးကလူတွေ ငေးမောကြည့်ကြပါတယ်….။ ကျွန်မကို မြင်ရတဲ့ အခါ သူတို့ကြည်နူးသွားတတ်ပါတယ်……။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မလှပါဘူး….. တပွင့်တည်းဆိုရင် ကျွန်မက အကျည်းတန်ပါတယ်…… မနှင်းဆီတို့ …..မသစ်ခွ တို့ လို မတင့်တယ်ပါဘူး……။ ကျွန်မရဲ့ ညီမတွေနဲ့ဝန်း ရံထားလို့ သာ ကျွန်မမှာ အလှရှိတာပါ…..။
မင်းသမီးလေးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင်စားထားပေမယ့် ကျွန်မက တော်ဝင်ပန်း မဟုတ်ပါဘူး…..(ပန်းတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မင်းသမီး လို့ စိတ်ကူးယဉ် မိတာ ပြစ်မှု မမြောက်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့……) ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ ကျွန်မ နေရာ မရပါဘူး…..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလဲ ပန်းပါဘဲ…..။ ပန်းဆိုတော့ ခြွေသူ…. ပန်သူ… ရှိတာပေါ့လေ….။
ကျွန်မ အနားကဖြတ်သွားတဲ့ လူတိုင်းက မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ တအားမွှေးကြူသွားကြတယ်….။ ကျွန်မရဲ့ ရနံ့ က မွှေးလှသည်လေ….။ ချစ်စဖွယ်ရနံ့ သင်းသင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကိုက ကျွန်မအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ “ဆု” ပါ….။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလူမျိုးတွေ စွဲမက်တဲ့ အနံ့ ….. နှစ်သက်တဲ့ အနံ့ ဖြစ်နေတာ ကျွန်မအတွက် ကံကောင်းခြင်းပါ……။
ကျွန်မ တော်ဝင်ပန်းမဖြစ်တာ ၀မ်းမနည်းပါဘူး…. အကျည်းတန်တာကိုလဲ မသိမ်ငယ်ပါဘူး….. အဖော်တွေရှိမှ တင့်တယ်ရတာကိုလဲ အားမငယ်ပါဘူး…..။ ကျွန်မ ကြေကွဲ ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တစ်ခုတည်း……တစ်ခုတည်းပါပဲ…..။ အဲဒီတခုက ကျွန်မကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းစေတယ်…..။ အဲဒီတစ်ခုကြောင့် ကျွန်မ အသည်းတွေ နာလှတယ်……။ အဲဒါက………………………………………………………………
ရှင်တို့ ကြားဖူးမှာပါ…. “ သနပ်ခါးပန်းက ပန်သူမမွှေးဘူး….. လက်တကမ်းကလူ မွှေးတယ် ” ဆိုတာလေ…..။ ကျွန်မကို ချစ်လှချည်ရဲ့…. မြတ်နိူးလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး ပန်ဆင်ထားတဲ့သူက ကျွန်မရဲ့မွှေးရနံ့ ကိုမရဘူး…. ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးကို မသိရှာဘူး…..။ သိပေမယ့် ဒါဟာတန်ဖိုးလို့မယူဆတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…..။ အဝေးကလူ…. နံဘေးကလူ…. လက်တကမ်းကလူတွေကတော့ ကျွန်မက ရနံ့ မွှေးတဲ့ ပန်းကလေးတဲ့…….။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ…. ကျွန်မက ပန်းပဲ…. အမြတ်တနိုးနဲ့ပန်ဆင်ခံရတာကိုက ကျေနပ်စရာပါ…..။ တန်ဖိုး ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လဲ….. ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး….. ကျွန်မက ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲ…….။ ကျွန်မက “သနပ်ခါးပန်း” လေ…..။ ။
နောက်ဆက်တွဲ ။ ။ မိန်းမတွေဟာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့ တူပါတယ်….။ ဂုဏ်သိက္ခာ….၊ ကိုယ်ကျင့်တရား…. ဆိုတဲ့ အဖော်တွေ ၀န်းရံထားမှတင့်တယ်ပါတယ်……။ ပိုင်ဆိုင်သူက တန်ဖိုးမသိဘဲ…. ဘေးလူ နှစ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးတွေလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်….။
၀န်ခံချက် ။ ။ လပြည့်နေ့ က “လေးမ” စိုက်ထားတဲ့ သနပ်ခါးပင်က ပန်းတွေပွင့်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားမိပြီး သူ့ အကြောင်းရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားခဲ့တယ်…..။ အပျင်းထူနေတာနဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး….။ ဒီနေ့မအိမ့်ချမ်းမြေ့ရဲ့ “တန်ဖိုး” ဆိုတဲ့ post လေးကိုဖတ်ပြီး comment မှာ အာချောင်ခဲ့မိလို့လေးမရဲ့ လက်ချောင်းတွေ keyboard ပေါ်မှာ အသက်ဝင်လာပြီး ဒီ postကိုရေးဖြစ်ပါတယ်…..။
Filed under: Flower | Tagged: Features |
« ရေးပေးခဲ့ကြသည် အရူးများမဖတ်ရ…ဖတ်သူများမရူးရ…(၁) »
တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့, on August 9, 2007 at 5:55 am said:
“အဝေးကလူ…. နံဘေးကလူ…. လက်တကမ်းကလူတွေကတော့ ကျွန်မက ရနံ့ မွှေးတဲ့ ပန်းကလေးတဲ့…..”
pandora, on August 9, 2007 at 3:49 pm said:
“မိန်းမတွေဟာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့ တူပါတယ်….။ ဂုဏ်သိက္ခာ….၊ ကိုယ်ကျင့်တရား…. ဆိုတဲ့ အဖော်တွေ ၀န်းရံထားမှတင့်တယ်ပါတယ်……။ ပိုင်ဆိုင်သူက တန်ဖိုးမသိဘဲ…. ဘေးလူ နှစ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးတွေလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်….။”
ဂျယ်ရီ, on August 9, 2007 at 4:27 pm said:
ဆင်ခြင်ဖွယ် စဉ်းစားဖွယ် စာနာဖွယ် မှတ်ယူဖွယ် ဖြစ်ပေတော့သည် ….. အို ….. ပုရိသအပေါင်း ယောက်ျားကောင်းတို့ ……….
hninhnin, on August 10, 2007 at 12:33 pm said:
Layma, on August 10, 2007 at 3:31 pm said:
naing, on August 10, 2007 at 3:52 pm said:
Layma, on August 11, 2007 at 10:27 am said:
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on August 12, 2007 at 2:54 pm said:
Layma, on August 13, 2007 at 12:48 pm said:
layma, on November 12, 2007 at 10:11 am said:
ဖတ်ပြီးတိုင်း မျက်၇ည်လည်ရတယ် …ဒါပေမယ့်
ရုံးလာတဲ့နေ့ တိုင်း အွန်လိုင်းကောင်းပြီဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ပြန်ပြန်ဖတ်မိနေတယ် .. မအပြာရောင် သိပ်တော်တာပဲ အားကျတယ် .. နောက်ထပ်အသစ်တွေတင်အုံးမလားဆိုပြီး နေ့ တိုင်းစောင့်ဖတ်နေပါတယ် …
Commented by : isabel | Date : 06/11/2007
မိန်းမတွေဟာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့ တူတယ်တဲ့လား
တို့လည်း မိန်းမသားတစ်ယောက်မို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်
Commented by : cherry2006 | Date : 05/11/2007
အစ်မရဲ့ စိတ်ကူးတွေက အရမ်းကောင်းတယ်နော်..
ဒီအကြောင်းအရာ က တကယ်ကိုဖြစ်နေတာတွေပဲ
နောက်ထပ်အများကြီးရေးပေးပါ အစ်မရယ်. စောင့်ဖတ်နေမယ်..
Commented by : audreywin | Date : 25/10/2007
……………ကျွန်မ ကြေကွဲ ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တစ်ခုတည်း……တစ်ခုတည်းပါပဲ…..။ အဲဒီတစ်ခုက ကျွန်မကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းစေတယ်…..။ အဲဒီတစ်ခုကြောင့် ကျွန်မ အသည်းတွေ နာလှတယ်…… ………ကျွန်မကို ချစ်လှချည်ရဲ့…. မြတ်နိူးလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး ပန်ဆင်ထားတဲ့သူက ကျွန်မရဲ့မွှေးရနံ့ ကိုမရဘူး…. ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးကို မသိရှာဘူး…..။ သိပေမယ့် ဒါဟာတန်ဖိုးလို့မယူဆတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…..။ အဝေးကလူ…. နံဘေးကလူ…. လက်တကမ်းကလူတွေကတော့ ကျွန်မက ရနံ့ မွှေးတဲ့ ပန်းကလေးတဲ့…….။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ…. ကျွန်မက ပန်းပဲ…. အမြတ်တနိုးနဲ့ပန်ဆင်ခံရတာကိုက ကျေနပ်စရာပါ…..။ တန်ဖိုး ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လဲ….. ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး….. ကျွန်မက ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘဲ…….
Commented by : isabel | Date : 25/10/2007
Shwun Mi, on January 19, 2008 at 8:57 pm said:
သနပ်ခါးပန်း သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဖွားဖွားကို သတိရလိုက်တာ .. ပန်းခူးသွားပါတယ် ..
သားကြွက်, on June 9, 2008 at 12:00 pm said:
ယောက်ျားလေးတွေကျ ဘာပန်းနဲ့တင်စားမလဲ 😛
layma, on June 9, 2008 at 7:48 pm said:
> မီ.. ဒဏ်ငွေ ၅၀၀ ပါ ..။
>သားကြွက် … ဘာပန်းနဲ့တင်စားခံချင်တုန်း … ။
ကောင်းကင်ကြီးနဲ့လေးမကတော့ေ၇ွှတိဂုံဘုရား အဂါင်္ထောင့်က ကလေးချီထားတဲ့ နတ်ရုပ် ကြီးမှာ ရွှေပန်းတွေ သွားသွားလှူနေတာပဲ … ။ သားလိုချင်လို့ …။
အဇ္ဈတ္တပြခန်း, on July 31, 2008 at 11:48 pm said:
မလေးမရေ.. မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သနပ်ခါးပန်းလေးရနံ့ကို နှိုင်းယှဉ်ထားတာ ယဉ်လှတယ်ဗျာ.. အတော်လေးထိမိသေသပ်တဲ့စာကြောင်းလေးပါ… ဒီပိုစ်လေးကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ အိမ်က သနပ်ခါးခြံတောင် ပြေးသတိရတယ်.. လေပြေလာတိုင်း တစ်ခြံလုံးသင်းနေတာ… အခုမှ ပြန်သတိရမိတယ် ကျေးဇူးပါမလေးမ.. ရေးသားတဲ့ပိုစ်အတော်များများကတော့. သေသပ်ကောင်းမွန်လှပါတယ်…
audreywin, on December 27, 2008 at 3:21 pm said:
အစ်မရေ အပြာရောင်ဆိုတာ မလေးမပဲပေါ့နော်။ ကျွန်မ ဒီပို့စ် ကို ပလဲနက်မှာ ဖတ်ထားပြီးကတည်းက စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ကို ဒီနေ့မှ ရောက်ဖူးတာပါ။ အခုခေါင်းစဉ်မှာ သနပ်ခါးပန်းပါကတည်းက ကျွန်မသိထားတဲ့ သနပ်ခါးပန်းများ ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး ၀င်ကြည့်လိုက်တာ တကယ်ပဲဟုတ်နေတယ်လေ။ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး။ ပျောက်သွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကို ပြန်တွေ့ရသလိုပဲ… 🙂
lay-ma, on December 27, 2008 at 9:53 pm said:
>ကိုပြခန်း.. ကိုမျိုးရဲ့ အားရှိစရာ မှတ်ချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..။ သနပ်ခါးခြံတောင် ရှိသလား.. ကောင်းလိုက်တာ..။ လေးမတော့ တစ်ပင်ပဲရှိတယ်…။
> audreywin … အပြာရောင်ကို ဒီလို မမေ့တာ သိရတော့ ၀မ်းသာတာ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး..။ ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်..။
Anonymous, on July 26, 2013 at 7:12 am said: